को-को पुगे रंगकर्मी विष्णुभक्त फुयाँललाई श्रद्धाञ्जली दिन,हेर्नुहोस् तस्विरहरु – Recent Nepal News
को-को पुगे रंगकर्मी विष्णुभक्त फुयाँललाई श्रद्धाञ्जली दिन,हेर्नुहोस् तस्विरहरु	काठमाडौं,पुस २० – रंगकर्मी एवं कलाकार विष्णुभक्त फुयाँललाई श्रद्धाञ्जली दिन विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुको समेत घुईचो लागेको थियो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, झलनाथ खनाल, प्रदिप ज्ञवाली, नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेता प्रज्ञा भवन पुगेका थिए ।
रंगकर्मी र कलाकारको बाक्लो उपस्थिति रहेको श्रद्धाञ्जली सभामा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल आउने बताइए पनि उपस्थित हुन सकेनन् । नाटकमा अभिनय गर्दा गर्दै निधन बेहोस भएका फुयाँलको विर अस्पतालमा निधन भएको हो । उनको आज नै अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।
Previousनेपालको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा कम शक्तिशाली,अन्यदेशको पासपोर्टको पावर कति ?
Nextस्मार्टफोनमा फोर-जी छ कि छैन कसरी हेर्ने ? स्मार्टफोन छनौटको तरिका